मेस्सी: जसले फुटबल दुनियाँलाई रुवाए .... - Naya Online
शनिबार, साउन ३०, २०७८ (August 14th, 2021 at 7:52am ) खेलकुद, ब्रेकिंग न्युज
भरौलको मनोज विष्ट
यो साता विश्व फुटबल जगत गरमागरम बन्यो । विश्वभरिका खेल समर्थक अझ बार्सिलोनाका समर्थकमा निराशा नै ल्याइदियो, कारण थियो बार्सीलोनाका कप्तान तथा विश्व फुटबलका हालका हिरो लियोनल मेस्सीको बार्सीलोनाबाट बहिर्गमन । गत जुनमा अर्जेन्टिनाबाट कोपा कप खेल्दै गर्दा बार्सिलोनाबाट सम्झौता सकिएपछि फ्री भएका मेस्सी, ४७ औँ कोपा अमेरिका कपको ट्रफी चुम्दै आफूलाई फुटबलमा शक्तिशाली ठहराउँदै केही दिन खुशियाली मनाउँदै अर्जेन्टिना मै भुलिए । आफ्नो बिदा सकेर केही दिन अघि मात्र सम्झौता थप गर्न भनी स्पेन आएका मेस्सी बार्सीलोनाले लालिगाअन्तर्गत खेलाडी ब्यवस्थापन नियम अनुसार उसलाई राख्न नसक्ने आधिकारीक विज्ञप्ति निकालेपछि विश्व फुटबल जगतमा तहल्का नै मच्चियो, तरंगित बन्यो ।
एक साताभन्दा ज्यादा विश्वभरिका अखबारहरूको हेडलाइन नै मेस्सीमय बन्यो । अबको उनको बाटो कता भन्ने विषय त सबैको चियोचर्चा नै बन्यो । अझ भन्नुपर्दा बार्सिलोना र युभेन्टस बिचको खेल हुनुभन्दा केही अघि मेस्सीले आफ्नो अन्तिम सम्बोधन गर्दा मेस्सी आफू त रोए नै एक पटक सिङ्गो फुटबललाई भाविह्वल बनाइदियो । हुन पनि दुई दशक आफूले पसिना बगाएको क्लब छाड्न त्यति सहज कहाँ हन्छ र ? जुन कुराले सबैलाई भाविह्वल बनाइदियो र मेस्सीप्रति नतमस्तक पनि बनायो । एक सालअघि उनी बार्सिलोना छाड्न चाहान्थे मिलेन, अहिले उनी तलबको भारी कट्टा गरेर भएपनि बार्सिलोनामै बस्न चाहन्थे तर उनको त्यो चाहना पूरा हुन सकेन । मेस्सीले आफ्नो खेल करियर बार्सीलोनाबाट नै सुरु गरि यसैमा अन्त्य गर्ने सोच बनाएका थिए । ३४ बर्षीय यी स्टाइकरले बार्सिलोनामा २१ वर्ष बिताए । आफ्नो दोस्रो घर नै बार्सिलोनालाई मान्ने मेस्सी बार्सिलोनाका हालसम्म कै सबैभन्दा सफल र उत्कृष्ट खेलाडी हुन् ।
मेस्सी बार्साको युथ एकेडेमी ला मासियाबाट सिनियर टिममा आएका थिए । उनले २००४ मा बार्साको सिनियर टिममा डेब्यु गरेका थिए । १७ वर्षको उमेरमा सिनियर टिममा डेब्यु गर्दै सिनियर टिमबाट १७ वर्षमा नै बार्साबाट खेलेका मेस्सी क्लबका सर्वाधिक गोलकर्ता र सर्वाधिक खेल खेल्ने खेलाडी पनि हुन् । उनले बार्साका लागि ७७८ खेल खेल्ने क्रममा ६७० गोल गरेका छन् । सुरुवाती सिनियर टोलीमा १९ नम्बर जर्सी लगाउने मेस्सी केही वर्षपछि क्लबको महत्त्वपूर्ण खेलाडी बन्दै १० नम्बर जर्सीमा मैदानमा देखिएका थिए । अझ भन्ने हो भने मेस्सी इनिस्टाको बहिर्गमनपछि कप्तानको भुमिका निर्वाह गर्दै थिए ।
मेस्सीले बार्साबाट जित्न बाँकी भने कुनै उपाधी राखेनन् । उनले बार्सालाई हरेक ट्रफी जिताएका छन् । २००९–१० र २०१४–१५ को सिजन गरी दुइपटक त ट्रेबल नै जिताए । त्यस क्रममा मेस्सी आफैंले पनि थुप्रै अवार्ड पाउन सफल भए । ला लिगा १० पटक, कोपा डेल रे ७ पटक, स्पेनिस सुपर कप ८ पटक च्याम्पियन्स लिग ४ पटक, युरोपियन सुपर कप ३ पटक र क्लब विश्व कप ३ गरि जम्मा ४५ ट्रफी जिताएका मेस्सीले आफूले भने व्यक्तिगत रूपमा किर्तिमानी प्रतिष्ठित बेलुन्डर अवार्ड ६ पटकसहित ४० अवार्ड पाउन सफल भए । यो अर्थमा मेस्सीले आजसम्म जे पाए बार्सिलोनामै रहँदा पाए ।
बार्सिलोनाबाट बाहिरिने बितिकै मेस्सीले मंगलबार बिहान पिएसजीसँग दुई वर्षको सम्झौता गरेका छन् । मेस्सी सन् २०२३ सम्म पिएसजीमा रहन समहत भएका छन् । उता मेस्सीको आगमनसँगै पिएसजीको फ्यानफ्लोअरर्स दोब्बर बढेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएको छ । स्पेनिस पत्रिका मार्साका अनुसार मेस्सी पिएसजी गएको २४ घन्टा मै ५३२ हजारको पिएसजीको सोरुमले बेचेर रेकर्ड कायम गरेको समाचार प्रकाशित गरेको छ ।
मेस्सीले पिएसजीमा ३० नम्बरको जर्सी लगाएर खेल्नेछन् । उनले जर्सी नम्बर ३० रोज्नुको अर्थ यो छ कि उनले बार्सिलोनाबाट सिनियर टिममा डेब्यु गर्दा ३० नम्बरकै जर्सी लगाएका थिए । मेस्सी पिएसजीमा अनुबन्धन हुनुमा उनका साथी ब्राजिलियन स्टाइकर नेमारको हात रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सन्चार माध्यमहरूले बताएका छन् । सबैको आंकलन अब पिएसजीको एटेक लाइन मेस्सी, नेमार र एमभापेका कारण खतरनाक हुनेछ । यो आंकलन के कति मेल खान जान्छ ? त्यो भने भविष्यले बताउने छ । जे होस् मेस्सीले पिएसजीमा सबैको मन जित्न सकुन् शुभेच्छा पनि ।